eklipsa - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Re: eklipsa
Miharena - 24/08/2017 09:05
Miharena Inona moa no hihazakazahan'i Vatican any amin'izany fahagagana..
Jesosy no (tokony) hihazakazahan'i Vatican, satria ireo Belazao (izay inoan'i Miharena) dia milaza fa Jesosy no teo.
Sa moa... ny Jesosin'i Miharena dia TSY Jesoan'i Vatican??
izaho indray ve hi-contredire anao @ izany
Miharena Iny fananganana hopitaly tsy midika fa tsy misy fahagagana.
Betsaka no azo arahina ireo mpijoro vavolombelona sitrana nahagaga ireo dokotera tao amin'ireny hopitaly ireny.
Eny ho'a ee.. tsy ny "fahagagana" no fikirina sy antenaina fa mbola mitady Siansa ihany.
Tandremo azany ho'a ry Miharena sao ho voafokafoka (ao @ imazination-nao) @ ilay hoe: "Ry Taranaka tsy mino sy ratsy fanahy"
Ny referansy iraisam-pirenena tsy mitovy amin'ny referansin'Andriamanitra Mpahary ka aza fehezina ho Vatican ihany no hakana toky ny fahamarinan'ny finoana Kristianina.
Ilay resaka hopitaly indray sy fanasitranana tsy dia tokony hifanipaka raha tsy hoe angaha mangataka any amin'ny devoly ny dokotera hanaovany fanafody hanasitranana.
rhaj0 - 24/08/2017 14:18
rhaj0 Eny ho'a ee.. tsy ny "fahagagana" no fikirina sy antenaina fa mbola mitady Siansa ihany.
Miharena Ilay resaka hopitaly indray sy fanasitranana tsy dia tokony hifanipaka raha tsy hoe angaha mangataka any amin'ny devoly ny dokotera hanaovany fanafody hanasitranana.
Ny fototry ny fitsaboana anao ara-tSiansa ao ry Miharena dia miainga @ fahalalana milaza fa
"Rien de se perd, rien ne se crée, tout se transforme."
Ohatra hoe, raha marary rein ianao, dia atao analizy ny amany sy ny rà, ka raha hita fa ny kasinga tokony arian'ny rein any @ amany mbola tavela ao @ rà, dia ... "Rien de se perd, rien ne se crée", fa dia ny rein-nao izany no voa eee.. ka mety ho faty ianao raha tsy tsaboin'ny dokotera.
Fa tsy hoe,
- ny Fanahy Masina na ny Fanahin-Devoly no nametraka ilay kasinga tao @ rà-nao,
- koa dia, hozy ny Guru-nao ao hoe, ivavaho, hikimpio maso mafy toa constipé io, rahefa avy asianao pensée mazika kely, sy tondrahanao resa-Baiboly, fa ho levona "ho azy" ao ity kasinga, ary hiverina hiasa tsara koa ny rein-nao,
Ary averiko foana, fa rahefa TSY mino fa ho sitranin'i Jesosy ianao, fa ilaozanao i Jesosy sy ny fahaizany "fahagagana", ary dia io ianao Miharena lasa mitonantonana any @ Siansa (rien ne se crée), dia ...
henoy tsara ho'a ny ao @ imazination-nao ao, fa miteny anao mihintsy Jesosy, toa ny nitenenany an'ireo mpianany taloha hoe:
"Ry Taranaka Tsy Mino Sy Ratsy Fanahy!!!..."
Miharena - 25/08/2017 21:11
Ny fototry ny fitsaboana raha ny marina dia ny filaminan'ny taova rehetra.
Ny olona tsy mahatandrina ny filaminana no marary.
Anisan'ny filaminana ny olona milamina ara-panahy ka tsy mila mpitsabo ara-medikaly.
Fa ny zavatra iray kosa tsy azo lavina dia rehefa ny Mpahary mahalala antsipirihany ny momba ny fiasan'ny taova amin'ny voary noforoniny no mikasika izany hahasitrana azy dia tsy tokony diofina.
Toy ny mpamorona fiara io, rehefa misy tsy mety dia hain'ny mpamorona azy hoe atsy na eroa no tsy mety.
Ka io ny tsy finoana fa misy fanasitranana ivelan'ny fanafodin;ny dokotera dia mahazendana ihany satria manamaivana ny Mpahary izany. Ny maty aza atsangaNY koa ny aretina indray no tsy haiNY sitranina!!
rhaj0 - 25/08/2017 22:21
Miharena Anisan'ny filaminana ny olona milamina ara-panahy ka tsy mila mpitsabo ara-medikaly.
Ianao ve ry Miharena "milamina ara-panahy" noho i Jean-Paul II ohatra. Isan-taona, nanomboka t@ 1992 h@ 2005 nahalasanany dia any @ HOpitaly i J-PII.
Ka tena TSY mandeha izany ilay "vavaka" eee...
"Mino" marimarina mihintsy aho, fa nahazo ilay "Ry Taranaka Tsy Mino Sy Ratsy Fanahy!!!..." koa i J-P II fa tsy niandry "fahagagana", tsy mahari-pery, fa lasa nihazakazaka tany @ Siansa.
Miharena - 29/08/2017 13:55
Maka ohatra amin'ny olona izay fantatrao fa nila fitsaboana hatrany ianao Rhaj0 fa tsy hiaiky nihitsy hoe misy ny olona higagan'ny mpitsabo ny fahasitranany noho ny fandalovan'i Jesoa.
Asa aloha ny nahazo an'i JPII fa dia iny aloha no nanjo azy. I Paoly Apostoly ao amin'ny Baiboly koa aza tsy nesorina taminy ny aretina nahazo azy satria izay no valinteny azony hoe tsy hafahana aminy ilay aretiny fa io no hoentiny mandra-podimandriny.
Fa izao ho'aho no lazaiko anao. Jereo aloha ireo fijoroana vavolombelona momba ny fahasitranana dia avy eo ianao manohy dinika mikasika ilay tranga fa tsy mibirioka mibolisatra toa io foana rehefa mba maka ohatra sy hanamarina tranga iray.
rhaj0 - 29/08/2017 17:13
Miharena Jereo aloha ireo fijoroana vavolombelona momba ny fahasitranana
Tsy mila mijery izay "vavolombelona" any izany ry Miharena, fa ny nataon'i Jesosy, izay voapetraka an-tsotratra ao @ Baiboly iverenana dia andriano aa..
-- manasitrana Jamba = fotaka + rora
-- manasitrnaa moana-marenina = tai-tsofina + rora
Izaho mino fa TSY nahavaky Baiboly comme il faut ry Miharena.. Sa mahay Baiboly ianao io ry Mharena?
Ka dia tena défier-ko mihintsy ianao raha mahatafavoaka ETO ny toko aman'andininy mitantara ireo "fahasitranana nataon'i JEsosy" ireo: fotaka+roa sy tain-tsofina+rora.
Ary ataoko dridran-gilo koa, fa rahefa TSY MINO ireo fahasitranana, recette-nJesosy ireo, dia ...
Miharena - 29/08/2017 22:33
Aza manao tsinontsinona toa an'io ianao Rhaj0.
Mazava be fa efa fantatra ny fanasitranana nataon'i Jesoa voasoratra fa mbola be ny ataony hatramin'izao itenenantsika izao sy ho amin'ny ho avy.
Ny olana dia rehefa tsy miaiky fa velona Jesoa dia miteniteny foana ary manda hatrany ny herin'Andriamanitra.
Raha misy ny mahazo teny momba ny taranakak tsy mino dia ny athee aloha izay fa tsy izay mino.
Ka aza mody adala rehefa tsy te-hanadihady ireny fijoroana ireny. Ny olana amin'ny olona athee manko dia mararirary izy raha vao itoriana ny momba an'i Jesoa satria angamba ny tiany harovana dia izay nanaovany pakta, na koa mampangirifiry ny sofiny izany Mpahary izany sy ny Zanany.
Ka sao dia ity farany no mahazo anao.
tsy maninona fa mba mitsora tsara mamaly io fanontaniako io an!
rhaj0 - 30/08/2017 01:11
Ka tsy sahy mamoaka ilay toko aman'andininy mitatitra ny recette-nJesosy ve ry Miharena aaa.. fotaka+rora sy tain-tsofina+rora raha hanasitrana Jamba sy Moana-marenina.
Efa nanadihady an'io tao @ Matio/MArka/Lioka/Jaona aho, fa ianao Miharena ho'a toa.. menatra ny nataon'i Jesosy angaha?
Miharena - 30/08/2017 19:49
Mbola maro ankoatr'ireo voalaza ao anty Baiboly ny fanasitranana ataon'i Jesoa.
Ohatra vitsy ao anatin'ny maro ny fisian'ny tantaran'ny Fifohazana, ny fisian'ny tantaran'i Tsaratsara, Nenilava sns tsy voatanisa eto daholo.
Ka tsy misy idiran'ny fahamenarana izany lazaiko izany fa mampandre asa goavana ataon'ny mino izay Jesoa mihitsy no mandray an-tanana ny asa miaraka aminy.
rhaj0 - 30/08/2017 20:09
Tena tsy mety (sahy) mitatitra eto ny nataon'i Jesosy Jesoa ny @ireo Jamba sy Moana-Marenina, araka ny voasoratra anaty Baiboly izany i Miharena ee...
Asa ho'a fa dia maninona loatra:
- tsy mamaky Baiboly "comme il faut" ve izy
- sa, TSY BAiboly "tena izy" no andriany ao
- sa, namaky "Baiboly tena izy" ihany izy, fa tonga saina, dia menatra ny nataon'i Jesosy Jesoa.
- sa, ...
Miharena - 31/08/2017 12:48
Vakio tsara izay voambara eo ambony fa asan'i Jesoa ankehitriny no lazaina eo.
Ny taloha dia efa ao anaty Baiboly ary mbola milaza aza ny ao hoe raha ny asa rehetra nataon'i Jesoa tsy ho omby ny boky rehetra manerantany fa izay vitsy ihany no ambara ao.
rhaj0 - 31/08/2017 13:41
Ireo asan'i Jesoa TALOHA izany dia tena TSY asian'i Miharena sira mihintsy ary TSY tian'i MIharena ho resahina eto akoriny an... Ireo asan'i Jesoa taloha voarakitra anaty Baiboly dia TSY mila tantarain'i Miharena intsony, ary toa ny TSISY DIKANY @ Miharena an..
Dia ireo ASA (fahagagana) moa izany io ahilika, na ataon'i Miharena tsy miseho interinety io, fa ny ASA (fampianarana) no mody hanetsenan-keloka dia itabataban-dry Miharena lava io hono an...
TAiro ao azany fa izaho indray ve hi-contredire anao @ izany ry Miharena aa..
Miharena - 05/09/2017 09:31
Aza volena eritreritra tsy mandalo amin'ny fisainan'ny namanao miresaka eto ny famalinao.
Tsy misy miresaka eo ambony hoe tsy misy dikany ny asa nataon'i Jesoa taloha.
Io fomba fambolena eritreritry ny tenanao manokana lazainao fa an'ny olona miresaka aminao dia mamaritra avy hatrany fa olona fohy fisainana ianao izay miteny satria manakilasy olona nefa tsy manana ny ampy hilazana izany akory.
Avereno vakiana tsara daholo ny laha-dinika dia mba tsimpony ireo hevitra miseho ho mahay ao aminao io Rhaj0. Indrindra indrindra fa rehefa manamafy hevitra ianao.
rhaj0 - 13/09/2017 14:48
Miharena Tsy misy miresaka eo ambony hoe tsy misy dikany ny asa nataon'i Jesoa taloha.
Dia fa maninona no tsy sahinao MIharena resahina azany ee??? fotaka+rora sy tain-tsofina+rora ??? tsy ampy finoana dia tsy mahasitrana??? voaompa hoe Ry Taranaka Tsy Mino Sy Ratsy Fanahy??
ka dia (ho) ataoko dridra-gilo ireo ambara-piaikainao Miharena (sy RBNIR) fa ireo no tena maha-Jesosy an'i Jesosy..
Miharena - 14/09/2017 07:40
Aza mamorona satria tsy nisy nireska tain-tsofina tao anaty Baiboly.
Io maniratsira io moa fombanao foana aza hoe iza marina no nitaiza anao ity Rhaj0.
Fa ny fanakilasiako izany aloha dia mazava hoe Devoly no mampianatra anao manao io fomba io.
Dia aza atao mpaminany indray aho hoe ho tezitra Rhaj0 ilazana izany dia hamalu bontana manaraka eo indray.
Asio fahalalam-pomba ihany e!
rhaj0 - 14/09/2017 14:12
Aboahy eto ny toko aman'andininy ry Miharena dia iarahana jerena eto, fa ianao izany koa anie ry Miharena, toa mbola "mino" foana fa ny itenenanao hoe "tsy nisy niresaka" no ela, dia tonga dia hanaiky izay teninao daholo ny olona. F'angaha ho'a izy ity, hoe ianao Miharena eny ambony alitara ee...
Miharena - 14/09/2017 19:43
Avoahy ny hitanao aloha fa raha toa anao ny olona dia tsy hanao izany mihitsy velively satria efa mpanohitra hiringiriny.
Mety mampangorintsina anao na mamaky Tenin'Andriamanitra aza.
Anatra ho anao : aza manao famingavingana dia mba manana fahaiza-miaina aloha dia ho hita eo.
Mba tiako ho hita amin'ny manaraka ity soratako ity izao ianao maneho Soratra ao anaty Baiboly aloha dia miteny hoe inona no dikan'io fa tsy mamorona antsanga tsy aman'orana mety heverinao fa hotohanan'ny olona.
Mba asehoy ny talenta raha nomena ihany fa raha faharatsian-toetra no talentanao dia ampirimo amin'izay.
rhaj0 - 14/09/2017 20:30
Ka tena TSY namaky Baiboly (@ tokony ho izy) izany ry Miharena, ary dia TSY hainy akoriny ireo tantara(-angano) ireo; Tsy hainy hoe aiza ho aiza ao @ Baiboly ireo. Dia ny loza dia lazainy fa "famingavingana" hono (ny mitatitra) ireo tantara(-angano) ireo. Nefa anie olombem-Baiboly no nanoratra azy e...
Eny azany kouh.. Izaho indray ve hi-contredire anao ho'a ry Miharena
Fa io ry RBNIR mba toroy ny havanao Miharena, fa manjary "hitan'ny havany eo" foana ny TSY fahaizany ee
Miharena - 14/09/2017 20:53
Aza manao zazakely maneho hevitra e!
Olona mivaralila be ilay miresaka!
Miharena - 14/09/2017 21:05
Araho ilay lojika ahitana anao hoe mitombin-tsaina.
Maka aloha andininy ao anaty Baiboly hoy aho dia hazavao raha mahay fa aza manohy fomba firesaka toa io hatrany.
Fananarana ihany moa ny ahy eto satria namana ianao Rhaj0, tokony havotana hitombintsaina kokoa e!